musha Basketball Vatambi Bio LeBron James Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Basketball Vatambi Bio
Yedu LeBron James Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, iyi Nhau yeHupenyu yeAmerican nyanzvi basketball basketball. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana cheLeBron James 'Bio.
Iyo Untold Biography yeLeBron James. Kubva pamazuva ake ehudiki kusvika kunguva dzeMukurumbira.
Ehe, iwe neni tinoziva nezve kutonga kwake muBasketball. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga LeBron James 'biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
LeBron James Nyaya Yechikoro Chemwana:
LeBron Raymone James akazvarwa pazuva re30th raDecember 1984 muAkron, Ohio, United States. Akanga akaberekerwa kuna amai vake, Gloria Marie James (ane makore gumi nematanhatu panguva iyoyo), uye baba vake, Anthony McClelland, uyo anonzi aive mudiwa waGloria aine marekodhi mazhinji ematsotsi.
LeBron James, baba, Anthony McClelland, uye naamai vake, Gloria Marie James.
LeBron James Mhuri Yemhuri:
Anthony paakaziva kuti aive abata amai vaLeBron nhumbu, akamusiya semunhu anotiza kubva munzvimbo yematsotsi, chiitiko chakasiya Gloria kuti agadzirise dambudziko rekuva amai vasina murume.
Mwana mudiki akarerwa naamai vake vasina murume.
LeBron James akaberekerwa mumhuri yakaderera-yemhuri. Kurerwa naamai vake kunoita kuti afunge nezvedzinza rake kunyanya kubva kumhuri yaamai vake. Rudzi rwake runoratidzika kuva rwakajeka, nekuda kweganda rake dema.
LeBron James Hupenyu hwepakutanga: Kushushikana kwaamai vake
Kuna Gloria, kusimudza LeBron James uye kugovera zvaanoda munharaunda yeSeedier yeAkron yakanga yakaita semukwidza usina kugadzirira kusvika pamusoro peMount Everest.
Kunyangwe aive akashinga kuti azvipfure nekuchinja nguva nenguva kwemafurati kune zvinokodzera mari yake iri kudzikira nekukurumidza. Akazomanikidzwa kutsika nzira yakamanikana yekuparadzaniswa kwenguva kuti awane kufarira kusingaperi.
Apo kusawirirana kwekupona kwakanyanyisa kuderera, akaiswa pasi pekutarisirwa kwevariritiri.
Kunyangwe akazvipira Lebric mudiki kumuchengeti wechidiki wechidiki wenhabvu anodzidzisa nhabvu, Frank Walker, uyo asina kungomutengera Basketball rake rekutanga asi akamupawo dzidziso yekutanga.
Tarisa uone nhoroondo yake yekutanga neBasketball.
Amai vaLeBron, Gloria Marie James, havana kumbomira kutsigira uye kuda mwana wavo panguva yese yaaigara.
LeBron James Dzidzo:
Yakanga iri mumaoko aFrank Walker kuti LeBron wechidiki (ane makore 9) akasangana nekutanga. Kutenda kwaari, LeBron James akapindwa muropa nemutambo uyu paakakura.
Iye aive anoda basketball kubva musi wekutanga.
Nekudaro, akatanga danho rakakura rekuvaka rake bhasiketi basa nekutamba kuNortheast Ohio Shooting Stars achiri mudiki.
Paaive mugiredhi rechina, akarasikirwa makumi masere nemasere kubva pamazuva echikoro zana nemakumi matanhatu nekuda kwekupindwa muropa neBasketball. Aive mugiredhi rechisere paakarova dunk yake yekutanga.
Yakanakisa sniper inotaridza dunk yake yekutanga mune basketball.
LeBron James Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu
Kare kumashure, achiri kuyaruka, akaudzwa nemurairidzi wake wekusekondari kuti aite gumi-push-up nguva imwe neimwe yaakapika mumutambo.
Akazogadzira homwe inotyisa neshamwari dzake nhatu Sian Cotton, Dru Joyce III, naWillie McGee. Ivo vese vakatungamira timu yavo yevechidiki kukunda mushure mekukunda kumakwikwi emuno neenyika yenyika.
Unogona here kuona achiri mudiki bhasikiti musvinu mumufananidzo?
LeBron James Biography - Mugwagwa weMukurumbira Nyaya:
Panguva ino, akange ave mutambi akamira pachikoro chesekondari, izvo zvakamuona ari pachivharo cheSports Illustrated mugore rake repamusoro.
Akatanga kubva paGrass kuenda kuna Nyasha.
LeBron James Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Kubvira panguva yebasa rake raenda kune imwe nzvimbo asi rakasimuka uye hazvina kutora nguva asati asvika murume akakura zvakakwana.
Tarisa uone yedu veteran basketball mukurumbira.
LeBron James Zvekare Ukama:
Akave akabatanidzwa netoni yevakadzi vakanaka. Ndiani waungati ndiye akanakisa?
Pakati pa1999 na2012, Lebr James aive neanogona kutsanangurwa seanopfupika-ups aine akati wandei anonakidza hunhu hwevanhukadzi kusanganisira Hencha Voigt (Asati abva 2000), Savannah Brinson (2000), Adrienne Horton (2003-2004), Meagan Makanaka (2004 ), Amber Rose (2010) naCarmen Ortega (2012).
Nezve Savannah Brinson - LeBron James Mukadzi:
Pasinei nezvipfupi zvipfupi, Lebron James ainakidzwa nekugona kuchengetedza hukama hwenguva refu newake mudiki wepamoyo chikoro, Savannah Brinson uyo waakazoroora naye mu2013 mushure meLeBron yakarongedzwa paEvha yeGore Idzva. Vaviri havana kuita yavo yemuchato pikicha.
Unyanzvi hunoratidza wake wemuchato.
Vanhu vazhinji vanogona, panguva ino, vanobvuma kuti Savannah abhadhara mari yake uye anokodzera mhete. Kune vaviri vakasangana muna 2000 uye vakadanana kwemakore gumi nerimwe anoshamisa, hazvina njodzi kutaura kuti izvo LeBron James anogovana naSavannah Brinson hazvisi zvishoma parudo rwechokwadi.
LeBron James Vana:
Izvo zvese zvakatanga muchikoro chesekondari apo LeBron James aive 17-gore-gore-rekuti Junior, uye Savannah aive 16-gore-okuberekwa chikoro chesekondari sophomore. Kunyangwe zvikoro zvavo zvaive mamaira maviri zvakasiyana, vaviri vacho zvisinei vakawana zvikonzero zvekudanana.
Ndichiri kuchikoro chesekondari, Brinson akabata pamuviri nemwana wavo wekutanga, LeBron James Jnr mugore ra2004. Makore matatu gare gare (2007), vakave nemumwe mwanakomana Bryce James, uye mugore ra2014, (mushure mekuroora) vakaita mwana wavo wekupedzisira Zhuri James.
Akavaka yakanakisa uye inoyemurika mhuri nekufamba kwenguva.
Nekukurumidza kumberi kusvika nhasi, Savannah yakaratidza kuve anoshamisa mukadzi naamai sezvo achishanda nesimba saamabhizimusi uye philanthropist.
Pamusoro pekurera vana vatatu vakanaka, kuchengetedza hupenyu hwemhuri yake hwakavanzika, uye kubatsira murume wake kuchengetedza musoro wake panguva dzakaoma.
LeBron James Hupenyu Hwemhuri:
Ichi chikamu cheBiography yedu chinokuudza Chokwadi nezve imba yeNBA Legend. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
LeBron James 'Baba:
Chinyanyo kuzivikanwa nezve baba vaLebron James, Anthony McClelland uyo akatiza mushure mekupa amai vaJames, Gloria.
Zvisinei, haaigona kunge aive nechero rakanaka kuna Yong LeBron dai akaramba akadzoka sezvo anga ari mutongi nemhosva zhinji dzematsotsi.
Kunyange zvakadaro, Lebron James anotenda kusavapo kwababa vake kwakamukurudzira kuti ave zvaari nhasi. Mu2014, LeBron akaita chinyorwa chakagadzirwa pane yake yemagariro midhiya mubato yaiti:
LeBron James 'meseji kuna baba vake pasocial media.
Amai vaLeBron James:
Gloria Marie James ndiye mwanasikana waFreda James. Ane hama mbiri, dzinoti; Curt naTerry James. Gloria akapedza hudiki hwake, makore ekuyaruka, uye kutanga kukura muAkron, Ohio.
Sezvambotaurwa, Gloria aive 16 paakazvara mwanakomana wake mumwe chete, LeBron Raymone James, pazuva re30th raDecember 1984.
Pazera ramakore 19, amai vaGloria, avo vakabatsira kurera LeBron vakashaya nekuda kwekuerekana varwara nemoyo paKisimusi mangwanani, chiitiko chinosiririsa chakaita kuti hupenyu huome kwaari nekuva mubereki basa rehunhu. LeBron akambonyora mutero kuna amai vake. Mumashoko ake;
Akandiisa pakutanga. Ndaiziva kuti zvisinei nokuti chii chakaitika, hapana uye hapana munhu aikosha kwaari kupfuura ini. Ndakaenda ndisina zvinhu zvakawanda, asi kwete kwechipiri chimwechete ndakafunga kuti ndisingakoshi kana kuti ndisingadiwi.
Gloria Marie James sekufananidzirwa pazasi zvino anofarira chibereko chebasa rake.
Kuda kwake mai vake hakuperi. Ona maitiro aakamugadzirira jersey kwaari.
LeBron James's Boyfriend yaAmai:
Zita rake anonzi Da Real Lambo. Sezvo Heavy anozviti, Lambo (inoratidzika pasi apa) ndeye muchengeti asingazivikanwi uyo anorembera semucheno kumhuri yaJakobho.
Mai vake havana zano rekuti varambe vasina murume hupenyu hwavo hwese. Tora hena kapi ga kere nompito daKarunga.
Iye naGloria vave kufambidzana kubvira 2011, uye abatana nemhuri yake pazororo rakawanda.
Kuratidzwa kwakanaka kwemashandisiro avanoita mari yavo yose semhuri.
Da Real Lambo anoda kutumira mapikicha pa Instagram ake pamwe nemhuri. Zvakawanda zvinyorwa zvinotomusanganisira akapfeka ringi yeLeBron yemakwikwi, iyo yaanoshandisa kuratidza kuti ari padyo sei nemwanakomana wemusikana wake (LeBron James).
Da Real Lambo anoratidzira mhete yeLeBron James 'yemakwikwi.
Iye anongova makore mashoma Lebron mukuru asi anodana Lebron rake “Wokutevedzera.” Kubva pamifananidzo yake yose, uyu akawana LeBron James vatsamwira vazhinji vachiti ari kunyengedza kuva mukurumbira.
Kubatana pakati pevarume - Da Real Lambo inoratidza kuswedera kwaakaita naJames.
Aaron McClelland Gamble ndiLeBron James 'mukoma-mukoma. Ivo vaviri vanakomana vaAnthony McClelland. Kunge amai vaLeBron, amai vaAaron vakasiyiwa kuti varere mwana wavo vari vega.
Kufanana kuri pakati pevarume ava kuri pachena, asi zvinosuwisa kuti maakaundi avo emabhangi akasiyana senge masikati neusiku.
Zvinoshamisa !! Wakatofunga kuti aive LeBron James.
Ipo LeBron ari kuumburuka muhupfumi sechiratidzo mumunda wake wekutamba, mukoma wake Aaron anotambura nehupenyu semuimbi anotambira mari shoma uye baba vasina murume.
Aaron McClelland Gamble haana kumbvunza Lebron chero chinhu chipi zvacho kunze kwomukana wekumuziva. Asi munguva pfupi yapfuura, AIDA rubatsiro rwemukoma wake kuviga amai vake vakafa nekenza.
Zvinosuruvarisa, LeBron James haana kuzombopindura, izvo zvakasiya kuravira kunorwadza. Lebron anopa zvakawanda kunharaunda yake nevanhu vaasingatombozive.
Zvisinei, iye anoramba kupa kune hama yake yeropa, uyo ari mukushaiwa kukuru. Izvi zvinodaro nekuti mukoma wake anoita kuti arangarire baba vake, izvo pachazvo zvisina kururamiswa.
LeBron James 'persona isanganiswa yeCapricorn zodiac maitiro. Kuongorora kukwirira kwenyanzvi yedu yeBhasikiti nyeredzi, zvakaonekwa kuti iye zvino ave 2.05m (6ft 8in) akareba.
Asi paanopfuura Michael Jordan's 1.98m (6ft 6in), akaramba kuyerwa.
Kureba kwake kuri pane rimwe rakasiyana nzira.
Kunyangwe achiwanzo kutaura nezvezvido zvake, zvido zvakawanda zvakaiswa paari.
Muna 2010, chiziviso chake chekusiya maCavaliers kuti ajoine Heat chakatariswa nevatariri vanosvika mamirioni 9.95. Icho chaive chechitatu chakatariswa zvakanyanya chirongwa paCable TV gore iro.
Ona kuti anonyemwerera sei achitaura nezvekutamisa kwake.
LeBron James Mararamiro:
Muna 2014, Forbes akatumidza James semutambi ane mukurumbira pasi rese. Kubva muna Chivabvu 2020, mutambi wedu ane mukurumbira wemitambo akafungidzirwa kuve nemambure akakosha emadhora mazana mana nemakumi masere.
Hupfumi hwake hwakawanda hunobva zvakanyanya kubva pakuedza kwake basketball pamwe nemamwe madhiri ebhizinesi.
Mumwedzi waChikumi 2014, Apple yakatenga Beats Electronics 3 Bhiriyoni Bhiriyoni. James akazova mubatiri mudiki mukambani iyoyo, nedanda rake raibata mazana matatu emamiriyoni emadhora kubva kubhizimusi.
LeBron James Untold Chokwadi:
Kuputira nyaya yedu LeBron James, hezvino zvimwe zvisinganyatso-kuzivikanwa chokwadi izvo zvingakubatsira iwe kuti uzwisise zvizere zvehupenyu hwake.
Chokwadi # 1: Chikonzero Nhamba yake yeJersey:
Mwana wake wekutanga akaberekwa pazuva re6 Gumiguru. Ichi ndicho chikonzero nei achifuka Nhamba: 6 jersey nhamba panguva yemazuva ake kuHeat.
Wow! Anotaridzika seane mapfekero ake akapfeka jersey rake Kwete.
Chokwadi # 2: Chakavanzika nezvemaoko ake:
LeBron James anogona kupfura zvimwe neruoko rwerudyi. Nekudaro, anoshandisa ruoko rwake rwekuruboshwe kuti adye uye anyore. Tarisa uone pamufananidzo pazasi uye uzvionere wega kuti hazvishamise sei kuti maoko ake anoshanda.
Kuratidzwa kwemaitiro aanoshandisa maoko ake kuita zvakasiyana.
Chokwadi # 3: Iye Anorekodha Breaker saMichael Jordan:
LeBron James ndiye mutambi wechipiri munhoroondo kuti akakunda NBA MVP, Finals MVP, uye Olimpiki Goridhe Medal mugore rimwe chete. Mumwe mutambi aive Michael Jordan.
LeBron's wiki knowledgebase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi;
Zita rizere LeBron Raymone James
Zita reNick Akron Nyundo
Zuva rekuzvarwa 30th December, 1984
Baba Anthony McClelland
Amai Gloria Marie James
Vanun'una Aaron McClelland Gamble (mukoma-mukoma)
Children Bronny, Bryce, uye Zhuri James
urefu 6 ft 8 mu (2.05 m)
uremu 113 kg (250 lb)
Kuvonga nekuverenga iyo Biography yaLeBron James, iyo Basketball Genius uyo anonyanya kuzivikanwa neNickname “Akron Nyundo”. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paLeBron James Biography uye Yehucheche Nyaya, vatariri vedu vaive vakatarisa kururamisa uye kururamisa. Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezve LeBron James.